ဆန်စက် ပစ္စည်းများ ပဲလေ့စက်များ စပါးခွံ ဓာတ်ငွေ့မီးစက်
Weifang international co., ltd. isafrofessional supplier for rice milling machine, pellet machine, biogas generator, and geniune spare parts.
ဝေဖန်း အင်တာနေရှင်နယ် ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် ဝယ်ယူသူများ၏ အားပေးထောက်ခံမှု့ ရရှိထားသော ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် အတွေ့အကြုံများဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော ဝေဖန်းကုမ္ပဏီမှ ဆန်စက်၊ ပဲလေ့လောင်စာတောင့်စက်၊ စပါးခွံ ဓာတ်ငွေ့မီးစက်နှင့် စစ်မှန်သော အပိုပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတစွာဖြင့် လက်လီလက်ကား ဝယ်ယူအားပေးပါရန် မြန်မာပြည်မှ လူကြီးမင်းများကို ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ ခင်ဗျာ။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အချက်အလက်များ သိရှိစေရန် ကျွန်တော်တို့ ဝေဖန်း ကုမ္ပဏီနှင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
မြန်မာပြည်တွင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်ကျော် အတွေ့အကြုံများဖြင့် အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးထားသော ဝေဖန်းကုမ္ပဏီမှ ဆန်စက်၊ ပဲလေ့လောင်စာတောင့်စက်၊ စပါးခွံ ဓာတ်ငွေ့မီးစက်နှင့် စစ်မှန်သော အပိုပစ္စည်းများကို ဈေးနှုန်းသင့်တင့်မျှတစွာဖြင့် လက်လီလက်ကား ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါသည်။
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဈေးဘေး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။
(၀၁၀ဘီ)၊ မြေညီထပ်၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ဟိုင်းဝေးကွန်းပလပ်စ်အိမ်ရာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
© Copyright Yangon Directory. All right reserved.